Klear Jikọọ: Influencer Marketing CRM na Ndepụta Mgbasa Ozi | Martech Zone
Klear, teknụzụ na-emetụta ihe atụ, agbakwunyela Klear Jikọọ, azịza zuru oke maka njikwa mgbasa ozi influencer. Ihe mmepe dị mkpa maka ahịa influencer-maka akara na ndị na - emetụta ya. Klear zara ajụjụ a:
Kedu ka ị ga-esi debe ihe niile?
Jikọọ nkwalite nkwukọrịta n'etiti ụdị na ndị na - eme ihe ike site na iji aka gị rụọ ọrụ akwụkwọ ntuziaka na usoro ndụ mmemme ọ bụla nwere ọrụ mkparịta ụka jikọtara ọnụ yana ike ịmekọrịta na ọdịnaya, na soro ịkwụ ụgwọ na akụkọ Instagram.
Klear Jikọọ na-enyere ụdị aka ịkwalite mmekọrịta ndị na-emetụta mmetụta na mmeri nke mkpọsa, gụnyere ike:
Boardnyịnya: Jiri ndebiri dị nkenke nwere ike ịnye ndị na-eme ihe gị ụkpụrụ nduzi dị mkpa iji mee mkpọsa gị
Mmekọrịta ọrụ: Idozi nkwukọrịta yana ọrụ nkata ejiri rụọ ọrụ iji nọrọ na kọntaktị mgbe niile na ndị na - eme ihe ike, kesaa ma kwado echiche echiche okike, yana ịgbaso na mgbasa ozi gị kachasị ọhụrụ
Nkwekọrịta: Zipu ma banye nkwekọrịta na-enweghị nsogbu
Trakwụ Tragwọ Ndepụta: Mkpokọta ịkwụ ụgwọ na inyefe ego ozugbo
Track Akụkọ: Kpọọ ndị na-eme ihe ngosi ka ha nyochaa profaịlụ nke Instagram ha maka ikike inyocha Akụkọ IG
Ijikwa ọrụ a na-eme kwa ụbọchị nke mgbasa ozi nwere ike ịbụ ihe ịma aka maka ndị na-ere ahịa, ọkachasị mgbe ụdị nwere ọtụtụ mkpọsa na-agba n'otu oge. Anyị mepụtara Klear Jikọọ iji mee ka usoro a ka ọ dị mfe ka ndị ahịa nwee mkpa mgbasa ozi ha niile n'otu ebe, na-enye onye ọ bụla ohere ijikwa usoro ahụ niile site na mmalite ruo na ngwụcha site na ikpo okwu Klear. ”
Eytan Avigdor, Klear CEO na ngalaba-onye nchoputa
Ngwọta Klear bụ interface jikọtara ụdị na mmetụta; Emepụtara Klear Jikọọ iji leba anya na mkpa CRM nke ndị ọrụ site na ime ka nkwukọrịta nghọta pụta. Uzo ahia nke influencer na enyere ndi ulo ahia aka ichota, jikwaa, nyochaa, ma kwuputa banyere ntinye aka ha na ndi ahia.
Jikọọ na-enye ụdị mpempe akwụkwọ dị mkpirikpi nke ụkpụrụ ntụzịaka ndị a na-ahụkarị, ihe mgbapụta, yana atụmanya ka ndị otu a nwee ike itinye ihe mgbaru ọsọ. Enwere ike ịkekọrịta ihe niile ozugbo na ndị na-eme ihe ike site na ọrụ Klear Jikọọ na-arụ ọrụ nkata, ebe enwere ike ịdebe ọganihu na ọkwa oge.
Tụkwasị na nke a, ụdị nwere ike ịkpọ ndị na-eme ihe ike ka ha nyochaa akaụntụ Instagram ha, na-enye ohere maka nsuso nke Akụkọ Instagram. Yabụ, ime ka usoro mgbanwe mgbasa ozi dị mfe.
Ntọala na 2011, Klear bụ azịza ahịa ahịa mmetụta dị oke mkpa, na-enye ndị na-ere ahịa ikike iji wuo, tụọ ma tụọ mmemme mmemme site na mmalite ruo n'isi. Site na nchekwa data kachasị dị na ahịa, Klear na-eji ụwa niile site na ụlọ ọrụ kacha elu 500 dị elu, yana ndị isi ahịa na mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze. Site na ikike ịbubata na micro influencers ma chọpụta ndị na-eso ụzọ adịgboroja, sọftụwia na-emeri Klear bụ ngwa ọrụ njedebe ruo na njedebe nke na-enye ndị na-ere ahịa ike ịmalite mgbasa ozi na-aga nke ọma. Ugbu a Klear nwere ndị ọrụ karịrị 30 n'ụwa niile, yana ọfịs na Tel Aviv, New York, Chicago, na London.
Hazie a Klear ngosi